Register of Enterprises eMelika: Inqubo Izinyathelo
A umyalo ezinhle izilimi zakwamanye amazwe kanye nekhono ukuzivumelanisa impilo entsha, i-profession ngokuya ezifunwayo kwelinye izwe kanye nesifiso esikhulu ukuba nithuthukise yena nomkhaya wakhe - kukhanye green nezinguquko ezinkulu ekuphileni kwakhe. Yebo, lokho kuyoba ekuphishekeleni emazinga ekuphila ephakeme futhi bavula amathuba ngokuvamile odlulela abantu ukushintsha lokuhlala, futhi ushiye Russia, isibonelo, eMelika.
Ngemva kokuthutha ibe ongaziwa osanda kufika ezweni elivame unenkinga umsebenzi. Yiqiniso, ukuthola ongaphakeme okhokhela efile ekupheleni umsebenzi kungaba futhi kulula, kodwa bambalwa kakhulu abantu bangavumelana kokukhethwa kukho enjalo, ngoba siyakucela kokuya Melika beyofuna okungcono, hhayi ngenhloso ukwehlisa yakho lokube nawo ezingeni lekuphila. Cacisa ukuthi kulesi sihloko sigxila samuntu, lapho indoda ekhaliphile, kokuba uhlolwa zonke izingozi futhi ulungiselele kusengaphambili yonke impilo entsha endaweni entsha iya kwelinye izwe siqiniseka ukuthi akwenzayo kuyophumelela. Sisebenza alikhulumi romance ephethe ipotimende kokuya injabulo, ukuthi - ". Kahle lapho senza hhayi"
Ngakho, ukuze uqaphele ngokwabo futhi sifinyelele ukuphumelela emsebenzini kungenzeka futhi e-United States: Uma okwakhayo kokuphishekela imigomo umuntu akesabi ushintsho nezinselelo, ungakwazi ukuvula ibhizinisi eMelika. Leli zwe ubhekwa ethembisa kakhulu ngokuya kokuvula okwabo e-United States inezinga zonke yimpumelelo ibhizinisi ukuchuma: ukuthuthukiswa okuqhubekayo nokuphishekela entsha, ubuchwepheshe esiyingqayizivele, ukungabi bikho kokukhanya inkohlakalo kanye anhlobonhlobo imisebenzi ukunikeza amathuba kakhulu ukubhalisa ibhizinisi kanye self-ngcono. UMbuso ikhuthaza ukuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane, ekusizeni osomabhizinisi abancane ukuze ngokuqiniseka yima ngezinyawo zabo. Kuyaphawuleka ukuthi uma ozokwenza ukuthekelisa kwezimpahla ezikhiqizwa e-US, uzonikezwa uchwepheshe iseluleko nokusekelwa isimo ezweni. EMelika, intuthuko ayikho indawo, imibono emisha nokwatholakala ahlinzeke insimu enkulu umsebenzi ngokuya ibhizinisi, kodwa uma ungeke ukwazi ukwenza ukuhlela izenzo zabo, ungahlala ukusebenzisa ngomumo umqondo okhaliphile webhizinisi.
Ngingayithola kanjani ukubhalisa yamabhizinisi kanye ukuvula ibhizinisi elisha e-Amerikha? Cabanga iingaba zekambiso.
Isinyathelo sokuqala ukuthola ulwazi oludingekayo ngendlela nekuwusebentisa. Ungasebenzisa izincwadi ekhethekile noma bheka izihloko ewusizo ku-intanethi. Kodwa indlela ephumelela kakhulu kungaba ukuya seminar eqhutshwa njalo e-United States. Ngakho - esigabeni sokuqala - ukuqeqeshwa. Uzokwazi ukuba nhlobo ukuthola ulwazi olugcwele mayelana zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama nezihibe - ukubhalisa ibhizinisi futhi kuvulwa Inkampani e-United States kwaba yimpumelelo. Futhi, uzodinga ukwazi imininingwane yokubhaliswa kwemibhalo kanye sokugcina isimiso sokuziphatha eminye yebhizinisi. Ngokulandelana - esigabeni sesibili - ukunikeza ulwazi lomthetho ekukwati kufundza nekubhala mayelana imibhalo design. Khumbula ukuthi inani elanele abameli Russian abanekhono usebenza Melika - ungathola ulwazi kuzo. Futhi esigabeni sesithathu - nendlela yokulondoloza imibhalo ukusebenza.
Uma umhlali esemthethweni Melika, ungakwazi kalula ukubhalisa inkampani uqobo. Uzodinga ukuba balungise inqubo incorporation, ukhokhe imali encane, futhi uwena lucky ngokwanele ukuba ngumnikazi inkampani yakhe.
Ukudala inkampani yakhe eMelika, wena uzothola amathuba amaningi ukuthi kuyoba lula kakhulu ukuwenza asebenze.
Ngempumelelo Business Strategy
Saturn. Mythology and ezinganekwaneni zezizwe ezihlukahlukene.
Indlela ukutshela izingane mayelana Easter? Isithombe "Easter" izingane
TOEFL: kuyini? Ukulungiselela ukuhlolwa kwe-TOEFL
Izimpendulo isikhalazo. isampula